Taiwan oo saraakiil sar-sare u soo direysa Somaliland iyo qorshe cusub oo socda | Warkii.com
Home warkii Taiwan oo saraakiil sar-sare u soo direysa Somaliland iyo qorshe cusub oo...
Taiwan oo saraakiil sar-sare u soo direysa Somaliland iyo qorshe cusub oo socda
Xukuumada Taiwan ayaa shaacisay in saraakiil ka tirsan maamulkeeda ay u direyso Somaliland, oo sanadkan horaantaasi ay kala saxiixdeen heshiis diblumaasiyadeed, kaasi oo keenay inay xafiis ka furato magaalada Hargeysa.
Mas’uuliyiinta ay Taiwan u direyso magaalada Hargeysa ayaa waxa ay qeyb ka noqonayaan dar-dar gelinta heshiiskii ay hore u kala saxiixdeen labada dhinac, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan dhinacyada horumarinta.
Wafdiga Taiwan ayaa dhawaan gaari doona Somaliland, kuwaasi oo soo indho-indheynaya arrimaha beeraha, isgaarsiinta, iyo mashaariicda caafimaadka maamulka Somaliland, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibedda ee Taiwan.
Sidoo kale waxay xubnahaasi hogaamin doonaan gar-gaar ay Taiwan ugu talo gashay xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi.
“Dhamaadka November, Sanduuqa Iskaashiga Caalamiga iyo Horumarinta (ICDF) ayaa koox gar-gaar u diri doona Somaliland, si ay u furaan xafiis saldhig u noqda shaqada laga bilaabayo bilawga 2021-ka”.
Somaliland iyo Taiwan ayaa leh xiriir wanaagsan oo diblumaasiyadeed, kaasi oo ay si weyn uga hor-yimaadeen dowladdaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo iyagu kala sheegta labada maamul, ee iyagu ku doodaya madax-banaanida.
Previous articleQM oo war cusub ka soo saartay dagaalka Tigray-ga
Next articleCabdi Xaashi oo si adag uga jawaabay eedeyntii Mahdi Guuleed
Madaxweyne ERDOGAN oo lagu dhaliilay garab istaag uu u sameeyay Soomaaliya
Dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha Turkiga, Rajab Teyib Erdogan ayaa lagu dhaliilay lacago ay ka bixisay Soomaaliya horaantii bishan. Mucaaradka dalka Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan ku...
Joe Biden oo la wareegay hoggaanka tirinta codadka gobolka Pennsylvania
QM oo war cusub ka soo saartay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab
Daahir Gelle: Arrin aan laba sano ka hor Farmaajo ka diiday...